श्रीमान् परदेशमा : श्रीमती पौरख गर्दै घरदेशमा ! – live 60media
श्रीमान् परदेशमा : श्रीमती पौरख गर्दै घरदेशमा !
लमजुङ – परिश्रम गर्ने हाे भने परदेशकाे भन्दा स्वदेशमै राम्राे कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण अचेल गाउँघरतिर धेरै भेटिन थालेका छन् । तिनै उदाहरणमध्येकी एक हुन् लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका–८, डुँड्कुलाकी सिर्जना कमली कार्की ।
श्रीमानको सल्लाहमै कृषि कर्म
← आज बालाचतुर्दशी पर्व : पशुपतिमा महादीपदान नहुने, किन छरिन्छ शतबीज ?
चलचित्रमा ओरालो लाग्दै गएपछि सुनील शेट्टीको रेष्टुरेन्टको विशेष चर्चा, कमाउछन् करोडौं →